Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.(Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमासमा खुद नाफा १४.३० प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ। चौथो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले समीक्षा अवधिमा खुद नाफा ७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा संस्थाको...
ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको लोभलाग्दो वित्तीय प्रगति, खुद नाफामा ३००% को छलाङ
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लोभ लाग्दो वित्तीय प्रदर्शन गरेको छ । यो अवधिमा संस्थाले गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा तुलनामा ३०० प्रतिशत बढीले खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । संस्था दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार संस्थाले ७ करोड ८७ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा...
बम्पर लाभांशले ग्लोबल आइएमई लघुवित्तका सेयरमूल्यमा चमक, सेयर किन्न खोज्नेको चाप बढी
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ३५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयरमूल्यमा सोमबार एकाएक चमक आएको छ । कारोबार दोस्रो दिन सोमबार संस्थाको सेयरमूल्यमा प्रतिकित्ता ७५ रुपैयाँले बढेको छ । झन्डै १० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भएर संस्थाको सेयर प्रतिकित्ता ८३० रुपैयाँ...
ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको वार्षिक साधारणसभा मंसिर ९ गते, मर्जर र लाभांश मुख्य अजेन्डा
काठमाण्डौ । उपयुक्त अन्य लुघवित्त संस्थासँग मर्जर र लाभांश वितरणको प्रमुख अजेन्डासहित ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो सातौँ वार्षिक साधारणसभाको मिति र स्थान तय गरेको छ । संस्थाको हिजो आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो मंसिर ९ गते लमजुङको बेसीसहरस्थित गेट वे हिमालयन रिसोर्टमा आयोजना गर्ने...
–विजय रावत जुम्ला । जुम्लाका किसानले यस वर्ष गत दुई आर्थिकको कुल निर्यातभन्दा बढी स्याउ निर्यात गर्न सफल भएका छन् । विगत दुई वर्षयताकै स्याउबाट भित्रिने आर्थिक आम्दानीको रेकर्ड तोड्दै यस वर्ष रु ३४ करोड १८ लाख ८० हजार बराबरको स्याउ निर्यात भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख बालकराम देवकोटाले बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५...
ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको अवितरित हकप्रद सेयर आजबाट लिलामीमा
काठमाण्डौ । ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको अवितरित हकप्रद सेयर आज मंगलबारदेखि लिलामीमार्फत बिक्री खुला गरिएको छ । संस्थाले सर्वसाधारण समूहतर्फको १०० रुपैयाँ अंकित ५६ हजार ५६१ कित्ता हकप्रद सेयर यही असोज २८ गतेदेखि लिलामी प्रक्रियाबाट बिक्री गर्न लागेको हो। संस्थाले गत साउन २१ गतेदेखि भदौ २३ गतेसम्म निष्कासन गरेको...
ग्लोबल आईएमई लघुवित्तले अवितरित हकप्रद सेयर लिलामीमार्फत बेच्ने
काठमाण्डौ । ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले अवितरित हकप्रद सेयर लिलामीमार्फत बिक्री गर्ने भएको छ । संस्थाले सर्वसाधारण समूहतर्फको १०० रुपैयाँ अंकित ५६ हजार ५६१ कित्ता हकप्रद सेयर यही असोज २८ गतेदेखि लिलामी प्रक्रियाबाट बिक्री गर्न लागेको हो । संस्थाले गत साउन २१ गतेदेखि भदौ २३ गतेसम्म निष्कासन गरेको हकप्रद सेयरमध्ये...
ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको हकप्रद सेयर सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका
काठमाण्डौ । ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निष्कासन गरेको चुक्ता पुँजीबराबरको सतप्रतिशत हकप्रद सेयर सुरक्षित गर्ने आज सोमबार अन्तिम दिन रहेको छ । संस्थाले चुक्तापुँजी रु. ११ करोड ४ लाख ५७ हजार ५०० मूल्यबराबरको १:१ सेयर अनुपापतमा निष्कासन गरेको हकप्रद सेयर आजसम्म खरिद गर्न सकिनेछ । कम्पनीले प्रतिकित्ता रु. १०० अंकित ११ लाख ४...
ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको हकप्रद सेयर सुरक्षित गर्ने मौका अब २ दिनमात्र
काठमाण्डौ । ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निष्कासन गरेको चुक्ता पुँजीबराबरको सतप्रतिशत हकप्रद सेयर सुरक्षित गर्ने अब दुई दिन मात्र बाँकी रहेको छ । संस्थाले चुक्तापुँजी रु. ११ करोड ४ लाख ५७ हजार ५०० मूल्यबराबरको १:१ सेयर अनुपापतमा निष्कासन गरेको हकप्रद सेयर आज आइतबार र भोलि सोमबारसम्म खरिद गर्न सकिनेछ । कम्पनीले प्रतिकित्ता...
भद्रपुर । झापाको चन्द्रगढी नागरिक उड्डयन कार्यालयले आजबाट दिउँसो २ बजेदेखि बिहान ७ बजेसम्म भद्रपुर विमानस्थल बन्द गर्ने भएको छ । विमानस्थलको धावनमार्ग मर्मतसम्भारसँगै स्तरोन्नतिको कार्य गर्न शुरु गरेकाले आजदेखि असोज ४ गतेसम्म (१५ दिन) का लागि दिउँसो २ बजेदेखि बिहान ७ बजेसम्म विमानस्थल बन्द हुने भएको हो । एक हजार ५०० मिटर लम्बाइ र ३०...
ग्लोबल आईएमई लघुवित्तद्वारा ३५% बोनस सेयर वितरण गर्ने घोषणा
काठमाण्डौ । ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ३५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ । संस्थाको सञ्चालक समितिको हिजो शनिबार बसेको बैठकले संस्थाको चुक्ता पुँजी ११ करोड ४ लाख ५७ हजार ५०० रुपैयाँको ३५ प्रतिशत अर्थात ३ करोड ८६ लाख ६० हजार १२५ रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने...
ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको रु. ११.०४ करोडको हकप्रद सेयर आजबाट बिक्री खुला
काठमाण्डौ । ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चुक्ता पुँजीबराबरको सतप्रतिशत हकप्रद सेयर आज मंगलबारबाट बिक्री खुला गरेको छ । संस्थाले चुक्तापुँजी रु. ११ करोड ४ लाख ५७ हजार ५०० मूल्यबराबरको १:१ सेयर अनुपापतमा हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता रु. १०० अंकित ११ लाख ४ हजार ५७५ कित्ता हकप्रद सेयर आफ्ना सेयरधनीहरुका...